प्रेमी र डिप्रेशन मुख्य कारण, यी हुन् आत्महत्या गर्ने भारतीय कलाकार - Glamorous Icon
२२ चैत्र २०७२, सोमबार ११:२३
Home›GIcon News›प्रेमी र डिप्रेशन मुख्य कारण, यी हुन् आत्महत्या गर्ने भारतीय कलाकार
प्रत्यूष बनर्जीले आत्महत्या गरेपछि अहिले सेलिब्रेटीहरुको यस्तो घटनाको खोजिनीति भैरहेको छ । भारतमा चलचित्र वा टेलिभिजनमा काम गर्ने कलाकारको आत्महत्याको खबर हरेक बर्ष नै आइरहेको हुन्छ । प्रत्यूषाले आत्महत्या गर्नुको कारण खुलेको छैन, तर प्रेमकै कारण उनले आत्महत्या गरेको चर्चा पनि छ । यहाँ हामीले टेलिभिजन तथा चलचित्र दुनियाँका केही कलाकारको आत्महत्याको घटनालाई प्रस्तुत गरेका छौ ।
१. सिल्म स्मिताः साउथ चलचित्रकी नायिका सिल्क स्मिताको लास सन् १९९६ सेम्टेम्बर ३ मा उनकै घरमा पाइएको थियो । पंखामा झुण्डिएर उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् । चलचित्रमा अभिनय र नृत्यले सिल्कको आम्दानी राम्रो थियो । यही समयमा उनका एक जना साथीले निर्माता बनेर चलचित्र बनाउन आग्रह गरे । उनको सो समय २ करोड गुमेको थियो । सिल्क पैसा गुमेपछि बहुतै कमजोर बनेकी थिइन् । उनै सिल्कको जीवनमा आधारित रहेर चलचित्र ‘द डर्टी पिक्चर्स’ पनि बनिसकेको छ ।
२. जीया खानः ‘निशब्द, हाउसफुल, गजनी’ जस्ता चर्चित चलचित्रमा अभिनय गरेकी जीया खानले सन् २०१३ जून ३ मा आत्महत्या गरिन् । २५ सालको उमेरमा नै यी नायिकाले आत्महत्या गरेपछि यसले चर्चा त पायो, तर कारण खुलेन । गतबर्ष आएको एक रिपोर्टका अनुसार आत्महत्या गर्नु अगाडि जीया खान गर्भवती थिइन् । जीयालाई गर्भपतन गराउनका लागि प्रेमी सुरजले औषधी दिएका थिए । यसपछि, जीया कमजोर बनेकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि नै जीयाले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
३. नसिफा जोसेफः टीभीमा देखिएकी चर्चित अनुहार नसिफा जोसेफले सन् २००४ मा २६ बर्षको उमेरमा नै आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनले सन् १९९७ मा ‘मिस इन्डिया यूनिभर्स’को ताज जितेकी थिइन् । एमटीभीको एक शो होस्ट गरेरै उनी चर्चामा थिइन् । प्रेमकै कारण उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनले बिहे गर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै आत्महत्या गरेकी हुन् । उनले आफ्नो हुनेवाला पति बिहे गरेको पुरुष हुन् भन्ने थाहा भएपछि आत्महत्या गरेकी हुन् ।
४. कुलजीत रंधावाः टीभी सिरियल ‘स्पेशल स्क्वाड र सीएटीएस’बाट आफ्नो नाम बनाएकी कलाकार कुलजीतले सन् २००६ मा आत्महत्या गरिन् । उनले आत्महत्या अगाडि लेखेको सुसाइड नोटमा जिन्दगीको तनावलाई झेल्न नसकेर आत्महत्या गरेको लेखिएको थियो । उनले मुम्बइमा रहेको आफ्नै अपार्टमेन्टमा आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
५. वीवेका बाबाजीः सन् २००२ मा आएको ‘ए कैसी मोहब्बत’मा काम गरेकी कलाकार विवेका बाबाजीले ३७ बर्षको उमेरमा पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनको यो आत्महत्याको तेश्रो प्रयास थियो । प्रेमीसँग अलग भएपछि डिप्रेशनका कारण उनले आत्महत्या गरेको चर्चा छ ।
यस्तै, आत्महत्या गर्नेमा तामिल चलचित्रका चर्चित कलाकार कुणाल सिंह पनि छन् । जसले मुम्बइमा रहेको आफ्नो अपार्टमेन्टमा सन् २००८ मा आत्महत्या गरेका थिए । श्रीमीतीसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण भएपछि उनले आत्महत्या गरेका थिए ।
तेलगु चलचित्रका कलाकार उदय किरणले पनि ३३ बर्षको उमेरमा सन् २०१४ मा आत्महत्या गरेका थिए । लगातार ७ वटा चलचित्र असफल भएपछि उनले यस्तो कदम उठाएका थिए । ३९ बर्षको उमेरमा कलाकार गुरु दत्तले पनि आत्महत्या गरेका थिए । आफ्नी पत्नीको अरु यूवकसागको सम्बन्धका कारण उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ ।
बेरिमोर बेरिमोर तेस्रो पटक डिभोर्स गर्दैबेरिमोर